UJames Harden kunye noSteph Curry kufuneka batshintshe ubomi ukuze baphumelele ngeli xesha lonyaka - I-Nba
UJames Harden kunye noSteph Curry kufuneka batshintshe ubomi ukuze baphumelele ngeli xesha lonyaka
UJames Harden kunye noSteph Curry ziindawo zokurhweba ngeli xesha lonyaka. Abakhuphisana naye kangangexesha elide bayiguqulile i-NBA ngokwamkela inqaku le-3 ngokudubula okungazange kubekho namnye ngaphambili; amanqaku amathandathu aphezulu exesha elinye kumzamo wamanqaku ama-3 kumdlalo ngamnye wonke eze kule minyaka mine idlulileyo, kwaye zonke zezikaHarden okanye iCurry. Umahluko yindlela abayenze ngayo. U-Harden wayephethe iqela ngaphandle kwamandla amakhulu eenkwenkwezi macala onke, ngelixa uSteph ebuya umva ukuze enze iinkwenkwezi ezimjikelezileyo zikhululeke.
isiGrike abc usapho
Ngoku, emva kwesizini yasendle etshintshe ibhalansi yamandla kwiNkomfa yeNtshona, iindima zabo zibuyisiwe. UHarden kufuneka ancame ukwenza intsebenziswano yakhe noRussell Westbrook asebenze, kwaye uSteph kufuneka abeke iqela leMfazwe ngaphandle kukaKevin Durant noKlay Thompson emqolo . Ngamnye unokuninzi anokukufunda komnye.
USteph nguNew Harden
Akukho mdlali unikele ngaphezulu kweCurry kwiisizini ezimbalwa ezidlulileyo. Uyemka ekuphumeleleni ii-MVPs ezilandelelanayo ukuya ekubeni yinto emva kokuvota wakuba uDurant efikile kwiGolden State. Ngelixa ebeka amanani amakhulu, akazange akwazi ukulawula ibhola ngendlela efanayo ne-Harden:
I-Ball Dominance Musa ukuxoka: Harden vs uSteph ekusebenziseni
Avg Ixesha lePoss
Umqolo 87.2 9.3 40.5 24.5 13.2
Ikhari 76.8 4.8 30.4 19.4 11.7
Oko kuya kutshintsha kweli xesha lonyaka. UDurant ushiye kwiarhente yasimahla, kunye noKlay ungaliphosa lonke ixesha lonyaka . Nabadlali abadumileyo uAndre Iguodala noShaun Livingston abasekho. UCurry, uDraymond Green, kunye noKevon Looney ngabo kuphela abadlali abaseleyo kwitumente yokugqibela yeWarriors ngo-2018.
U-D'Angelo Russell, ofunyenwe kwiiNets ngokusayinela ukuthengisa kunye nokuthengisa uDurant, uya kunceda. Umdlali oneminyaka engama-23 ubudala uza kuvela kumdlalo wakhe wokuqala we-All-Star Game, kwaye unakho ukuqhuba ulwaphulo-mthetho lweeMfazwe kwaye asongele ngokuzikhusela ngokuchasene nebhola.
Kodwa uSteph angangadlali kangako ngeendleko zakhe ezintsha, njengoko umqeqeshi weGolden State uSteve Kerr kunokwenzeka ukuba bayothuse imizuzu yabo ukugcina enye isemgangathweni. Oonogada babini badlale imizuzu engama-49 kunye ngaphambi kwexesha lonyaka, ngelixa uCurry edlale imizuzu engama-49 ngaphandle kukaRussell noRussel badlale imizuzu engama-50 ngaphandle kukaSteph.
Umdlalo uya kuba nzima ngakumbi kuCurry ukuba uKerr unika uRussell uncedo ngakumbi xa edlala yedwa. Indlela esetyenziswe ngayo iGreen kwi-preseason iyasixelela: Udlale iipesenti ezingama-82.6 zemizuzu yakhe kwi-preseason kunye no-Russell xa kuthelekiswa ne-62.8 yeepesenti yemizuzu yakhe no-Curry.
Kuya kubakho okuninzi kukaStep-on-five ngeli xesha lonyaka. IiWarriors azinatalente zininzi kumdlalo wazo wokuxhasa:
I-PG: USteph Curry, uKy Bowman (ikhontrakthi yeendlela ezimbini)
SG: D'Angelo Russell, Jordan Poole, Damion Lee (ikhontrakthi yeendlela ezimbini)
I-SF: UGlenn Robinson III, uAlec Burks, uJacob Evans
PF: UDraymond Green, uEric Paschall, uAlen Smailagic
C: Kevon Looney, Willie Cauley-Stein, Marquese Chriss, Omari Spellman
Eyona ndlela ilula yokuba uSteph aphumelele kwi Indima efana neHarden kukunyusa inqanaba lamanqaku ama-3 . U-Harden uhambe ekuthatheni i-10 3s ngomdlalo ngamnye ngo-2017-18, kwiqhina elibambekayo kunye noSteph (9.8), ukuzama i-13.2 kwi-2018-19, uninzi lwembali ye-NBA. Akukho sizathu sokuba uCurry, owenza i-avareji ye-11.7 yemizamo kumdlalo ngamnye kwisizini ephelileyo, akakwazanga ukuthatha imali efanayo, ukuba ayingaphezulu, ngeli xesha lonyaka. Ukuzikhusela akunakwenza lukhulu ukuthintela isiphatho sebhola esine-trigger esheshayo kunye nebala elingenamda ukusuka kwi-3s yokudubula. Kwaye uSteph wayenokuba yingozi ngaphezu kweHarden ngokukhanya okuluhlaza okungenamda. Ungumdubuli womsebenzi ongama-43.6 weepesenti ukusuka kubunzulu, amanqaku angama-7.1 aphezulu kunoHarden.
Ingxaki kaCurry iya kuba kukuguqula imveliso yakhe iphumelele. Enye yeendlela iiRocket ezazibuyisa ukungabikho kwamandla enkwenkwezi ejikeleze uHarden yayikukudlala ngesantya esikhawulezayo sama-26 kwiligi kwisizini ephelileyo. Bawucothisa umdlalo ekukhaseleni, babekela ecaleni i-superstar yabo phezulu kwisitshixo, kwaye nokuba uthatha inyathelo lokubuyela umva 3, wafika erim, okanye wafumana i-shooter evulekileyo. Nantso indlela yokuguqula umdlalo webhasikithi ube yimbambano yomntu ngamnye, lelo qela elingenaso italente eninzi ejikeleze i-superstar yalo ekufuneka lijolise kuyo.
Kwelinye icala, iiWarriors zihlala zidlala ngokukhawuleza kwixesha likaSteph. Babekwisihlanu esiphambili kwisantya kumaxesha abo amabini okugqibela phantsi kukaMark Jackson kunye nesine sokuqala phantsi kukaKerr ngaphambi kokutyibilika. 10 kwisizini ephelileyo. Kodwa ukonyusa inani elipheleleyo lempahla akunakuba lolona khetho lwabo. IGolden State kungafuneka idlale ngokubi, igcine imidlalo isondele, kwaye ndiyathemba ukuba uSteph ubabamba kade.
Ukwahlukana kwengoma elungileyo
Akungabazeki ukuba iCurry inokufumana amanqaku njengoHarden ngobusuku obunikiweyo. Kodwa ngaba angayenza iinyanga ezintandathu enganxibanga? Kuninzi ukubuza kumntu oneminyaka engama-31 ubudala oye wadlala kwii-NBA Finals ezintlanu ezidlulileyo. USteph kuya kufuneka atyhale umzimba wakhe ngendlela engekabikho xesha lide. Thelekisa nje umthwalo wakhe kunye noHarden: UHarden uphulukene nemidlalo eli-15 kwaye wadlala imizuzu engama-8, 365 kumaxesha amathathu aqhelekileyo adlulileyo, ngelixa uSteph ephoswa yimidlalo engama-47 kwaye wadlala imizuzu engama-6 600.
Eyona nto iphantsi komdlalo weHarden kukungaguquguquki okunje nge-metronome. Kwi-6-foot-5 kunye ne-220 yeepawundi, wakhiwe njengetanki, emvumela ukuba athabathe ukubetha emva kokubethwa kukhuselo ubusuku bonke ngaphandle kokufumana ukonzakala okunzima. Ngaba iCurry, ehlola i-6-foot-3 kunye ne-190 yeepawundi, inokwenza okufanayo? Eli lelona qela linetalente ayidlalileyo okoko i-Golden State yaqalisa. Kuya kuba mnandi ukubona indlela anokuzithwala ngayo.
I-Harden yiSteph eNtsha
IHarden kuye kwafuneka yenze yonke into kwiiRockets kwisizini ephelileyo. Ubudala ekugqibeleni babambelela kuChris Paul, u-Eric Gordon wadlula kwislumping sokudubula ixesha elide, kwaye uClint Capela kunye noPJ Tucker abakwazanga ukuwenza umahluko. Oyena mntu wayenokuba nguHarden, kwaye isiphumo sayo yayiyeyona mikhankaso mikhulu kwimbali ye-NBA. Akekho omnye umdlali, nditsho noWilt Chamberlain okanye uMichael Jordan, okhe wafumana amanqaku amaninzi (36.1) kunye noncedo (7.6) njengoHarden kwisizini enye.
Yena unokuphinda uyenze kwakhona. Ukwehla okunxulumene nobudala kusekude ku-Harden, oneminyaka engama-30 ubudala ongathembeli kwisantya okanye amandla okutsiba. Uya kuba yingozi ngakumbi xa ephethe umlenze wesithathu-umlenze owodwa, umpu oye wazama ngawo ngaphambili.
Umbuzo ngowokuba ingaba kufanele . I-Westbrook luhlobo olwahlukileyo lweendleko kunoPaul. UPaul ngumdubuli ophakamileyo okhululeke ngakumbi ekumiseni abadlali beqela lakhe kunokuzingela eyakhe imbumbulu; I-Westbrook, i-career ye-30.8 yeepesenti ye-3-shooter, ayenzi ingqiqo enkulu kwindima yokuncedisa. Ukumlinganisa kulwaphulo-mthetho lweRokethi kwi-preseason kunzima. Udubule iipesenti ezingama-26.9 ukusuka kwisi-3 kwizi-6.5 zokuzama ngaphandle kokulinganisa kuphela imizuzu engama-25.0 ngomdlalo ngamnye, ephantse wayiphinda kabini i-average ye-career ye-3.6 ye-3-point-point in 34.5 imizuzu ngomdlalo ngamnye.
I-Westbrook ibinengxaki yeminwe emininzi kwi-preseason, kodwa wayejongeka njengaye xa edlala ngaphandle kwendleko zakhe ezintsha, ngokwe-NBA Advanced Stats:
Ngaba Kungcono Ngaphandle Kweendevu? IWestbrook kunye neHarden kwiPreseason
Ipesenti yokwenyani yokuDubula
Kunye noHarden Isine 25 42.8
W / o Harden 40 39.5 59.7
Ngelixa amanani eWestbrook ngaphandle kweHarden ayephantse afane noko ayekwixesha lakhe le-MVP e-Oklahoma City, amanani akhe no-Harden ayebububi. Ipesenti yokudubula yokwenyani yeWestbrook kuloo mizuzu kwi-preseason yayingaphezulu kwamanqaku amabini asezantsi kunelona liphantsi kwi-NBA phakathi kwabo bonke abadlali abafanelekileyo (45) kwisizini ephelileyo.
Kukho uhlengahlengiso olunokwenziwa ngumqeqeshi weRokethi uMike D'Antoni ukunceda inkwenkwezi yakhe entsha. Unokusebenzisa iWestbrook njenge-cutter-into engazange yenzeke kube kanye kwi-preseason-imdlale ngakumbi kwisithuba, okanye umsebenzise njengomvavanyi. Kodwa ezo ziimilinganiselo zokugqibela. Elona thuba lihle lokuphumelela eHouston kukuhlasela irim kunye noHarden bemenzela indawo. Ingxaki kukuba iyakunyanzela uHarden, omnye wabadlali ababulala bodwa kwimbali ye-NBA, ukuba atshintshe umdlalo wakhe. Ngelixa kungafanelekanga ukuba abe ngumdlali oncedisayo kwisenzo esibi, naye akanakudlala indima enkulu njengoko wayenjalo kwi-preseason. Ufumene amanqaku amaninzi kwaye wathabatha ngaphezulu kule preseason kunokuba wayenzile kunyaka ophelileyo, kwaye wafumana iipesenti ezingama-46.1 zezinto zakhe ezihlaselayo ngaphandle kokuthelekiswa xa kuthelekiswa neepesenti ezi-5.5 kwimizamo yokubona indawo.
UHarden ufuna ukunceda iWestbrook ngendlela efanayo uSteph wanceda uDurant. Ngenxa yokuba uHarden ungumdubuli ongcono kunoWestbrook, unokufumana amanqaku ngokungena kweWestbrook ngokulula kakhulu kunokuba iWestbrook inokufumana amanqaku akhe. Ayisiyonto ilungileyo yokusetyenziswa kwezakhono zikaHarden, kodwa ukudlala ngaphandle kweDurant yayingekuko ukusebenzisa okungcono kukaSteph, nokuba kunjalo.
Olu luhlobo olutsha lomceli mngeni kuHarden. Akuzange kufuneke ukuba ancame okoko weza eHouston. Emva kwamaxesha amathathu njengendoda yesithandathu e-Oklahoma City, uchithe isixhenxe esidlulileyo njenge-alpha kunye ne-omega yolwaphulo mthetho lweRocket. Wonke umntu ababemngenise, ukusuka kuDwight Howard ukuya kuPaul, bazilungelelanisa naye. Amanqaku akhe ngomdlalo ngamnye kunye neenzame zenjongo yasentsimini ziphakanyisiwe kumaxesha amahlanu alandelayo. Kodwa elona thuba lakhe lokwenza ukuba isebenze neWestbrook kukuba loo manani ehle.
Iikholeji gameday amaxesha isikwere
Kwithiyori, uHarden kufuneka abe nexesha elilula lokuba nguSteph kunokuba uSteph abe nguHarden. Ukwenza kancinci kulula kunokwenza okungaphezulu. Kodwa ungenzi okungangako unemicimbi yawo. U-Harden ugqibe kwindawo yesibini kwi-MVP yokuvota kwiinyanga ezintathu zexesha elidlulileyo. Uza kuphendula athini ukuba uSteph uzokufumana ikhredithi ethe kratya malunga nesitayile somdlalo awenzileyo? Sele kukho uninzi lwe-buzz malunga no-Steph ukuya kwi-MVP yakhe yesithathu ngeli xesha lonyaka.
Induduzo ka-Harden kufuneka ibe kukuba akukho lungelelwaniso lincinci phakathi kokuphumelela i-MVP kunye nesihloko se-NBA. Kwenzeke izihlandlo ezihlanu kuphela kule minyaka ingama-20 idlulileyo. USteph waphumelela izihloko ezibini ngokunikezela ngezibalo zakhe ukuba azidlale noDurant. Elona thuba lihle lokuba uHarden aphumelele eyakhe kukuba enze okufanayo neWestbrook.
u-arthur miller kunye no-marilyn monroe
sinead O'connor kunye nenkosana
Iibhilidi zeebhiliyoni zeebhasikidi zepiramidi
Kutheni ndingakwazi iprojekthi ye-astral
i-spike jonze ulwandle oluphakathi